St. Kitts & Nevis inogumisa zvirambidzo pakufamba nendege kubva kuIndia neSouth Africa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau » St. Kitts & Nevis inogumisa zvirambidzo pakufamba nendege kubva kuIndia neSouth Africa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
St. Kitts & Nevis inogumisa zvirambidzo pakufamba nendege kubva kuIndia neSouth Africa.
Sezvakaziviswa muna Chivabvu 29, 2021 vafambi vakazara chete vachatenderwa kupinda muFederal.
St. Kitts & Nevis vanogamuchira zvizere jekiseni revashanyi vemhepo vekunze vanobva kuIndia neSouth Africa.
Kubviswa kwezvirambidzo zvekufamba panguva ino kuIndia neSouth Africa kunoenderana nekusimudzwa kwezvirambidzo kune vafambi vanobva kuUK musi waGunyana 1, 2021.
Kitts & Nevis yekudzivirira kwekufamba inoramba iri munzvimbo yevafambi vekunze vanobva kuBrazil.
St. Kitts & Nevis vanogamuchira vakabaiwa zvizere vafambi vekunze vemhepo kubva kuIndia neSouth Africa pamwe naGumiguru 18, 2021, kubviswa kwechirambidzo kune vafambi vanobva kunzvimbo mbiri idzi. Kubviswa kwezvirambidzo zvekufamba panguva ino kuIndia neSouth Africa kunoenderana nekusimudzwa kwezvirambidzo kune vafambi vanobva kuUK musi waGunyana 1, 2021, uye zvinowirirana nekuenderera mberi kwekumusoro kwezinga rekudzivirira muFederal. Kurambidzwa kwekufamba kunoramba kuripo kune vafambi vekunze vanobva kuBrazil.
Pakati pevanhu vakuru ve St. Kitts & Nevis, 77.4% vakagashira imwe dziviriro yeAstraZeneca / Oxford yekudzivirira, iine 70.3% yevakuru vanhu vakabaiwa zvakakwana; pakati pevana nevechiri kuyaruka vari pakati pemakore gumi nemaviri - 12, 17% yevakagamuchira dosi yavo yekutanga yemushonga wePfizer / BioNTech ne10.9% vagamuchira madosi maviri. (Statistics saGumiguru 6.8, 19).
Kubvira Gumiguru 7, 2021, "Zororo munzvimbo" yakaderedzwa kusvika maawa makumi maviri nemana, neiyo inodiwa RT PCR bvunzo bvunzo yakatorwa panzvimbo ye "Kufamba Yakatenderwa" mahotera uye pekugara. Mhedzisiro yebvunzo ichaitwa kuti iwanikwe mukati meawa makumi maviri nemana "Zororo munzvimbo." Vaya vafambi vane mhedzisiro yemuedzo wakashata vanogona kusanganisa zvizere muFederal mushure mekunge 24-awa yapfuura uye vanakidzwa nezviuru zvakawanda St. Kitts & Nevis zvinopihwa zvinosanganisira, yekudyira mumaresitorendi, uchiona vibe pane imwe yemahara emahara mabara pane "Iyo Strip," tichishanyira edu akasarudzika uye-e-erudzi zvinokwezva, kufamba nemvura yakajeka, kukwira gomo rinoputika, kutenga misika yemakoni emuno kana kungo kutonhora pane imwe yemahombekombe edu.
Kuregererwa kuri munzvimbo yevagari vemo uye vagari veFederal yeSt. Kitts neNevis uye vana vane makore ari pasi pegumi nemasere vachiperekedza vabereki vavo vachengeti zvizere.
Ese maProtocol Ekufamba uye Zvinodikanwa zvasara munzvimbo yeFederal of St. Kitts & Nevis, kusanganisira kuendesa kweasina bvunzo mhedzisiro kubva kuRT PCR bvunzo 72 maawa asati asvika.
Mufambi anoonekwa achibaiwa jekiseni rakazara kana vhiki mbiri dzapfuura kubva pavakawana yavo yechipiri dosi yemaviri majekiseni ekudzivirira akateedzana (Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca / Oxford, Sinopharm kana Sinovac), kana masvondo maviri mushure mekunge vagamuchira jekiseni rimwe chete rekudzivirira ( Johnson & Johnson). Kusanganiswa kwemajekiseni akatenderwa eSt. Kitts neNevis zvinogamuchirwa.